Zuva reMosquito Day rinocherechedzwawo neWorld Tourism Nhasi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Zuva reMosquito Day rinocherechedzwawo neWorld Tourism Nhasi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • dzidzo • Hurumende Nhau • Health News • India Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Pavakabvunzwa kana marariya yakakanganisa vashanyi vemuSouth Africa, 60% yevanobata basa vakabvunzwa mwaka uchangopfuura wemalaria vakabvumirana nemubvunzo uyu, zvichiratidza kuti marariya ine chakakanganisa huwandu hwevashanyi vanoshanyira nzvimbo iyi. , Nyamavhuvhu 20 inoonekwa sezuva reWorld Mosquito Day rekusimudzira kuziva nezve chirwere uye chirwere chinokonzerwa nehumhutu.
Chishanu, Nyamavhuvhu 20 izuva renyika reMosquito, chikonzero cheindasitiri yepasirese yekushanya neyekushanya kurangarira uye kuenderera mberi nekurwisa kutyisidzira uku.
Zuva iri rakagadzirirwa kukurudzira vanhu kuti vazive kutyisidzira kuri kuuya kwezvirwere zvinotakurwa neumhutu semalaria & dengue fever.
Vanhu vanofanirwa kutora matanho ekudzivirira kuti vagare vakachengeteka kubva kuMosquito vanozvarwa vakasununguka chero kupi pasi.
Gore rega rega paWorld Mosquito Day, nyika inorangarira kuwanikwa kwekuti mukadzi Anopheles mosquito ndiyo vector inotapurira malaria pakati pevanhu. Uku kutsvaga kwakakosha, kwakaitwa naSir Ronald Ross muna 1897, kwakave hwaro hwehurongwa hwakawanda hwekudzora marariya hunosanganisira Indoor Residual Spraying uye Insecticide Treated Nets pamwe nekuvandudzwa kwemalaria kurapwa mishonga uye chemoprophylaxis.
Mhemberero ndeyekuti kuwanikwa uku kwakachinja sei nhoroondo yezvokurapa.
Kunyangwe mamirioni ehupenyu akaponeswa nekuda kweichi chinhu chimwe chete chakawanikwa, malaria iri kuramba ichiisa mutoro unorema kune nyika dzakabatwa, nekufungidzirwa kufa kwevanhu vanosvika zviuru makumi mana nepfumbamwe zvakakonzerwa nechirwere ichi pasi rose muna409,000 chete.
Muna 2014 isingarapike Hutachiona hunotakurwa neumhutu uhwo kutyisidzira kutashanya muCaribbean yakaonekwa muCaribbean uye yakagadzira kutyisidzira kwechokwadi kushanya.
Nhasi, Target Malaria vatsvagiri uye vesaenzi pasirese pasirese vanoramba vachidzidza hutachiona hutakura marariya mukuyedza kugara pamberi pechirwere chinogara chichienderera uye vawane ruzivo uye nzira dziri nani dzekurwisa chirwere ichi.
Nhau dzeZuva reMosquito Zuva riri kuuya kubva munyika umo mosquitos iri kutyisidzira kwehutano nekuchengeteka kuri muIndia.
PaZuva reMosquito Day kuzivisa kunopararira kuburikidza nevezvenhau zvakapoterera kudiwa kwekudzivirirwa kubva kumhutu.
Iine tagline ye'Kill Pests, Kill Diseases ', kambani yeIndia yezvipembenene inovimbisa kuita imba yega yega isina chirwere.
Iyo kambani iri kuita zvirongwa zvekuzivisa vatengi uye nhaurirano mukubatana pamwe neinotungamira nhau chiteshi.
Kubudikidza neEMBED (Elimination of Mosquito Borne Endemic Diseases) chirongwa, GCPL yakagadzira nhanho dzakanaka mukudzivirira malaria panzvimbo yehuswa-mudzi.
Muna 2015, chirongwa ichi chakatangwa kuMadhya Pradesh mukubatana nebazi rezvehutano nevemhuri rezvehutano kubvisa malaria kubva kumisha ine vanhu vakawanda.
Chirongwa ichi chakafukidza anopfuura mazana masere emisha mumatunhu gumi nerimwe eMadhya Pradesh, Uttar Pradesh, uye Chhattisgarh. GCPL yakabatana nevatori vechikamu kumhanyisa zvirongwa zvekuchinja maitiro mumatunhu ane huwandu hwegore hwehutachiona hwehutachiona hwehutachiona hwemarariya hwakanyanya.
Izvi zvakakonzera 24% yemazana masere makumi masere nematanhatu ekupindira achimhan'ara nyaya dze malaria pakupera kweFY824-0.
Misha yakasara yaive mugore rekutanga rekupindira uye chinangwa ndechekuita kuti isave nemalaria mugore rechipiri negore rechitatu.
GCPL, mukuwedzera, yakawedzera iyo portfolio kune dengue kudzora uye manejimendi mumaguta mana (Bhopal, Gwalior, Lucknow, uye Kanpur) uye iri kupa zvakare technical technical kuNational Vector Borne Disease Control Chirongwa (NVBDCP) pasi peGoI Ministry yeHutano & Mhuri. Hutano.
Vachitaura pachiitiko, Sunil Kataria CEO, akati, "KuGCPL, kuedza kwedu kuita kuti India ive noutano, yakachengeteka, uye isina hosha dzinotakurwa nevhitera. Kubva denda re COVID-19, rave kunyanya kukosha kungwarira nekuda kwekutyisidzira kwakapetwa kwezvirwere zvinotakurwa neumhutu nehutachiona. Pa World Mosquito Day, tinokurudzira munhu wese kutora matanho ekudzivirira malaria kana dengue.
Isu takazvipira kutyaira akawanda akadai matanho anozogonesa vanhu vane ruzivo rwakakosha uye mhinduro dzekurwisa njodzi yeumhutu.
Iyo Health Management Information System (HMIS), dhatabhesi yedata reNational Health Mission (NHM), rakarondedzera zviuru zvematambudziko emarariya nedengue kesi muIndia pakati paApril 2020 kusvika Kurume 2021.
Kunze kwekukanganisa kwehutano, mutoro wezvehupfumi nehupfumi kana mari yegore rino munyika nekuda kwemalaria nedengue yakanyanya kukwirira.
Tichifunga nezvezvinonetsa izvi, GCPL kuburikidza nehukama hwayo uye zvigadzirwa zvakagadzirwa zvine chinangwa chekuchinja hunhu pakati pevanhu kuti vazvidzivirire kubva kuzvirwere zvinotakurwa neumhutu.
Adv. Jayant Deshpande, Honorary Secretary, Kumba Tupukanana Kudzora Association (HICA) - indasitiri yebazi rezvipembenene zvemumba, rakati, "Kugadzirisa njodzi inokonzerwa neumhutu, munhu anofanirwa kushandisa mhinduro dzakakodzera uye dzinovimbika chete.
Mumusika mune mafashama nezvigadzirwa zvekunyepedzera zvakadai semiti inodzinga mosikito inodzinga rusenzi ine zvinokuvadza.
Izvi zvigadzirwa kubva kuvatambi vasina hunhu zvinogona kutaridzika kunge zvakachipa asi usapfuure nenzira dzakarongedzwa dzekugadzira uye cheki yekuchengetedza pamamiriro ekuchengetedza eganda, ziso, uye nzira yekufema yakarairwa kune ese epamba mishonga yezvipembenene.
Zvese zvisiri pamutemo mosquito inodzinga rusenzi inonamira tsika uye haina kuyedzwa pane zvambotaurwa zviyero. Chero kushandiswa kweizvi zvisizvo zvisiri pamutemo zvinodzinga hwehutu zvine njodzi kune hutano hwevagari mumazera ese. "Tinokurudzira munhu wese kuti ashandise zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvinotenderwa nehurumende."
Dr. Myriam Sidibe, nyanzvi yezvehutano yepasi rose uye purofesa anokudzwa wechiitiko kuLondon School of Hygiene uye Tropical Medicine, "India yakaita basa rakanaka mukudzora marariya nedengue kesi mumakore mashanu apfuura. Sezvo isu tese tichigadzirisa hupenyu hwedu kudzivirira COVID-5, kuyedza kuwedzera kudzikisira kukanganisa kwezvirwere zvinotakurwa neumhutu zvinofanirwa kuenderera mberi.
Hurumende dzinogona kunge dzichisheedza maoko ose padanda kuti dzigadzirise denda re COVID-19, asi isu hatifanirwe kumisa nguva yedu refu yekurwisa umhutu. Kubatana kweveruzhinji-akazvimirira kuchave kwakakosha mukuderedza mutoro wezvehupfumi nehupfumi kuIndia nekuda kwemarariya, dengue, nezvimwewo zvirwere.
Kudyidzana uku kunogona kutungamira kuzvinhu zvitsva zvinonakidza uye mamodheru ekudzivirira kupararira kwezvirwere zvinotakurwa neumhutu. ”
Cuthbert Ncube kubva ku African Tourism Board inoyeuchidza hurwere hwepasi rose hutakurwa neumhutu kuti irambe ichityisidzira indasitiri yekufambisa neyekushanya kunyanya muAfrica, uye munhu haafanire kukanganwa kana achipfuura nedambudziko re COVID-19.